संघीयताको 'अति' ले नेपाल रहँदैन - विप्लव , महासचिव, नेकपा माओवादी | Janakhabar
संघीयताको ‘अति’ ले नेपाल रहँदैन – विप्लव , महासचिव, नेकपा माओवादी
- के गरिरहेको छ, नेकपा माओवादी यतिबेला ?
- तपाईंहरू संघर्ष, संघर्ष भनिरहनु हुन्छ, अबको संघर्षको स्वरूप सशस्त्र हुन्छ कि शान्तिपूर्ण ?
- त्यसो भए संघर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
- पटकपटकका सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षका उपलब्धिलाई केही व्यक्ति र प्रवृत्तिले उपभोग गर्न पाए पनि समग्र जनताले त पाएको देखिँदैन ? फेरि पनि हुने संघर्षलाई हाम्रो समाजले थेग्न सक्ला ?
- ०४६ यताका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न सहयोग नगरेर फेरि किन संघर्ष गर्नुपर्‌यो ?
- शान्ति-सम्झौता उल्लंघन भएको प्रसंग उठाउनुभयो, बाह्रबुँदे समझदारी गर्नु नै गलत थियो भन्ने हो ?
- भारतको मध्यस्थतामा भएको भनिएको बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसले निम्त्याएको परिणामले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो देखिन्छ कि कमजोर ?
- संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सत्तापक्षको व्यवहार र प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
- भारतले नेपाली राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ ?
- नेकपा माओवादीको चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
- समकालीन राजनीतिमा तपाईंको सहकार्य केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंह कोसँग हुन्छ ?
- कुनैबेला तपाईं र वर्षमान पुन पुष्पकमलका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँसँग सम्बन्ध कस्तो छ ?
- तपाईं र बाबुरामबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा निकट हो ?
यो नेपालमा काम नपाएका राजनीतिज्ञले गर्ने विश्लेषण हो । आफूमा आत्मविश्वास नभएपछि हजारथरी कुरा गरेर भात खाने मेसो निकाल्ने मात्रै हो । त्यसको कुनै औचित्य छैन । छलफल र कुराकानी त सबैसँग हुन्छ । कोहीप्रति पूर्वाग्रही र निकट बनाइदिने दलाल मनोवृत्ति हो, त्यसलाई हामीले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
- विभाजित माओवादी आन्दोलनका घटक दलहरूले तपाईंलाई नै नेतृत्व सुम्पन तयार भए माओवादी आन्दोलन पुनः एकताबद्ध हुन सक्छ ?
- वर्गीय मुद्दा छोडेर कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय मुद्दा उठाएको पाइएको छ । तपाईंहरूले पहिचानसहितको संघीयता छोडिदिनुभयो । नेपालमा संघीय संरचना जरुरी छैन ?
- त्यसो भए संघीयता अब तपाईंहरूको एजेन्डा रहेन ?
- तपाईंहरूले चाहेको संरचना कस्तो हो ?
- सरकार एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा छ । माओवादी ती चुनावमा सहभागी हुन्छ ?
- एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन नभएको अवस्थामा आउने राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ ?
- त्यस्तो राजनीतिक संकट आउने बेलामा शक्तिकेन्द्रहरूले तपाईंहरूलाई पनि उपयोग गर्ने खतराको बारेमा विश्लेषण हुने गर्छ नि ?
- अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँनेर छ नेकपा माओवादीको स्थान ?
- मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दाले मधेस र मधेसी जनताका समस्या समाधान होला ?
- धार्मिक सहिष्णुता र असहिष्णुताको रूप तपाईंहरूले देखिरहनुभएको छ, नेपालमा धर्म निरपेक्षता रहनुपर्छ कि पर्दैन ?
- अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकसँग माओवादीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
अहिले हामीलाई हाम्रै आन्दोलनको चिन्ता छ, अन्तर्राष्ट्रिय विभागले विभिन्न ढंगले गर्ने छलफल छँदैछ ।
- भारतसहित विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील माओवादी संगठनहरूसँगको सम्बन्ध ?
- राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने आकलन गरिँदैछ नि ?
साभार – चिरञ्जीवी ढुंगाना/रेवती सापकोटा , अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट